Azonao atao izao ny misintona ny Dropbox beta mifanaraka amin'ny Apple M1 | avy amin'ny mac aho
Dropbox dia iray amin'ireo orinasa nandray azy io tamim-pahatoniana kokoa mba hampifanaraka ny rindranasa synchronization ny rakitra hanaovana azy mifanaraka amin'ny Apple ARM processeur.
voatery nitaingina tabataba tsara amin'ny tranokalanao taorian'ny valin'ny fanontaniana tao amin'ny tranokala fanohanana momba ny dikan-teny ho an'ny processeur ARM ho an'ny orinasa hanambarana izany drafitra mandroso hanavao ny fampiharana azy.
Herinandro latsaka kely lasa izay, nanomboka ireo lehilahy tao amin'ny Dropbox fitsapana amin'ny beta mihidy ny fampiharana mifanaraka amin'ny Apple ARM processeur. Amin'izao fotoana izao, toa nahomby tanteraka ny fitsapana voalohany ary vao avy nanambara ny orinasa ny fisian'ity beta ity ho an'ny mpampiasa rehetra.
Amin'izany fomba izany, raha mpanjifa Dropbox ianao na mampiasa ny dikan-teny maimaim-poana ary manana Mac tantanan'ny processeur M1, M1 Max na M1 Pro ihany koa ianao, azonao alaina ity beta voalohany ity ary adino tanteraka ny fampiasana ny emulator Rosetta 2 mba ahafahana mampifanaraka ny atiny voatahiry amin'ity sehatra ity.
Amin'izany fomba izany, ny fampiharana dia afaka araraoty tanteraka ny endri-javatra rehetra atolotry ny Apple ARM processeur: hery haingana sy kely kokoa, endri-javatra mety indrindra ho an'ny fampiasana fitaovana azo entina ary indrindra rehefa miasa amin'ny rakitra lehibe.
Araka ny efa nolazaiko teo ambony dia mbola tsy mifanaraka amin'ny processeurs ARM an'ny Apple ny fampiharana Dropbox ofisialy, satria amin'izao fotoana izao dia beta. Raha tianao alaivo ity beta open box voalohany ity Ho an'ny processeur ARM dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny East rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Afaka misintona ny Dropbox beta mifanaraka amin'ny Apple M1 ianao izao
Araraoty ny tolotra atolotry ny oniversite Apple